Fikarakarana Tsa-tsiou gasy - nahandro tsotra malagasy
par Gaël RAKOTOVAO	 20 avril 2016
Tsa-tsiou malagasy amin’ny fomba tsotra ho an’ireo tsy manana lafaoro.
Fotoana ikarakarana azy: 5 mn
Fotoana iketrehena azy : 30mn
3 cuillère à soupe de sauce soja,
500g de viande de porc (soro-kisoa).
Fikarakarana Tsa-tsiou gasy
Lomana ny alina amin’ny huile ny ail voatoto tsara sy ranona gingembre sy 3 càs de sauce soja sy 2 càs de miel sy ny 1/4 càc de sel sy 1 càc de 4 epices (hita eny amin’ny pavillon na mpivarotra épice hafa) ary ny soro-kisoa na mitetika na tsia araka izay tiana. Raha tiana ho mena toy ny eny @ restaurants dia asiana colorant alimentaire.
Ny ampitso atao anaty vilany na lapoaly jobo ireo rehetra ireo. Asiana rano 1 verre ary avela ho mendimendy tsara.
Rehefa manomboka ritra ka mitsetsatsetsa ny lapoaly dia avadibadika sady akosokosoka amin’ny lapoaly ny hena ahazo loko tsara ny lafiny rehetra.
tsa tsiou chinois aux légumes
Azo ampidirina lafaoro na koa atsatsika amin’ny barika misy afo izy ity.
Raha miditra lafaoro 200° dia eo amin’ny 1h eoeo ny temps de cuisson. Mora masaka ny echine.
Ingrédients Tsa-tsiou, nahandro malagasy, Préparation de Tsa-tsiou, recette de cuisine malagasy, Tsa-tsiou malagasy
Article précédent : Makasaoka
Salade variée malagasyArticle suivant :